Maxaa laga dhaxlay musiibada qaraxii Soobe? – Bandhiga
Maxaa laga dhaxlay musiibada qaraxii Soobe?
Muddo sanad ah ayaa ka soo wareegatay tan iyo markii uu dhjacay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen kaa oo 14-kii October ka dhacay isgosyka Soobe ee magaalada Muqdish.
Halka uu qaraxa ka dhacay ayaa ah waddo laami ah waxaana ku hareereysan goobo ganacsi sidoo kale ku yaala Isgoys saxmad badan oo gawaarida laga raro ayaa ku dhaw.
Marka laga reebo maalmaha ciidamada amaanka Soomaaliya ay xeraan wadadaasi inta kale aad ayaa loo buux dhaafiyaa marwalbana mashquulkeeda ayaa badan.
Waxey aheyd maalin Sabti ah saacaduna ay dhex maquuraneysay sagaalkii Galabnimo mar qura waxaa isbadalay jawiga guud ee Muqdisho markii gaari xamuul ah uu isku qarxiyay isgooyska Soobe ee magaalada Muqdisho oo boqolaal qof ay dhex joogtay xiligaas.
Dhimashada iyo dhaawaca wali si rasmi ah looma oga balse in kabadan 500 oo qof ayaa ku dhimatay halka dhaawaca uu kabadan 1,000 qof oo kale.
Waxyaabaha laga dhaxlay qaraxaasi waxaa kamid ah in Soomaalida isku gurmatay oo shacabka ku nool goboladda kala duwan ee dalka iyo kuwa ku nool Muqdisho ay u gurmadeen dadkii dhibanayaasha ahaa ee qaraxaasi waxyeelada ka soo gaaartay.
Marka laga soo tago raashiin iyo daawo la soo gaarsiiyo dadkii Soobe wax ku noqday waxaa sidoo kale ay heleen deeq dhiig ah oo uga timid madaxda dalka iyo qeybaha kala duwan ee Shacabka.
Dowlado dhowr ah ayaa Soomaaliya u soo gurmaday qaarkood shacabkii dhaawacmay ayey u daabuleen dalalkooda sida Turkiga iyo Qatar halka dalalka deriska la ah Soomaaliya ay deeq dawo ah soo gaarsiiyeen Muqdisho.
Todobaad kadib 5 qof oo lagu tuhmayo iney ku lug leeyihiin Qaraxaasi ayaa la xukumay oo mid kamid ah uu maqnaa, waxaana dil toogasho ah lagu xukumay mid kamid ah shaqsiyaadkaasi halka kuwa kale xabsi ciidan iyo sando lagu kala xukumay.
Hadda oo qaraxa ay ka soo wareegatay muddo sanad ah dowladda Soomaaliya waxey u sameysay Taalo taa oo laga dhisay isgoyska Soobe si ay u noqoto xusuus Qaran, waxaase muuqata in dowladda ay ka gaabisay iney il gooni ah ku eegta dadkii ay musiibadaasi u geysatay dhibaato aan caadi aheyn.